Onye na-eji Twitter? | Martech Zone
Onye na-eji Twitter?
Tuesday, May 12, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Taa, abụrụ m onye ntụle na Business Growth Institute maka Indianapolis Chamber of Commerce. Ìgwè mmadụ ahụ nọ na-arụsi ọrụ ike, nke mere na awa 2 iji kọwaa ahịa na ịntanetị bụ tad bit ike.
Susan Matthews nke Borshoff (a na-eduga ụlọ ọrụ aha na azụmaahịa na midwest) na m ga-agbasochi anya iji hụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike iwepụta ogbako iji gaa n'ihu itinye aka na ịza ajụjụ niile.
Dị ka mkparịta ụka niile nke ịzụ ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta, mkparịta ụka ahụ nwere ntakịrị akụkụ Twitter. Ajụrụ m ajụjụ ndị a:
Kedu mmadụ ole jiri Twitter maka azụmaahịa ha? Aka ole na ole.
Mmadu ole amaghi ihe Twitter bu? Aka ole na ole.
Kedu mmadụ ole na-amaghị ihe Twitter bụ mana ihere na-anabata ya? Ọtụtụ ndị ọzọ ụjọ na-achị ọchị.
N'oge a, ndị di na nwunye kwuru na naanị ịmalite iji Twitter. Ihe sochiri bụ ndị mmadụ mara mma nke ukwuu na mkpọtụ mkpọtụ na Twitter na ozi bara uru. Ekwenyere m… na ọ sitere n'ike mmụọ nsọ na-esonụ eserese nke nkwụsị nke ndị ọrụ Twitter:
Cheta na: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkatọ izi ezi nke ọnụ ọgụgụ ndị a, biko gụọ nke m disclaimer.
N'ịbụ onye jiri Twitter maka afọ ole na ole gara aga, enwere m ekele maka usoro maka ozi m nwere ike ịchọta. Echere m Enwere ike iji Twitter rụọ ọrụ maka azụmaahịa - mana olu nke mkpọtụ na-arịwanye elu.
Maka onye bịara ọhụrụ na Twitter, mkpọtụ nwere ike ịnụ ntị. Ikekwe ọ bụ ya mere Nielsen ji chọpụta ọtụtụ ihe ọhụụ Ndị ọrụ Twitter na-ahapụ ọrụ ahụ n'oge na-adịghị anya. Na mbu, ụfọdụ chere na ndị ọrụ na-ahapụ webụ ma na-agagharị na ngwa, mana Nielsen kamgbe emelitere stats ha ma gosipụta na njigide ndị ọrụ ọhụụ ka bụ nnukwu nsogbu.
Tags: Igwe ahia ahia ahiaSocial Media Marketing
Azụmaahịa nke Netwọk mmekọrịta
Mee 13, 2009 na 7: 15 AM
Nlebanya na-adọrọ mmasị dị otú ahụ!
Twitter na-eto eto n'Australia n'ọ̀tụ̀tụ̀ dị ịrịba ama, anyị atụlewokwa nchoputa Nielsen n'oge na-adịbeghị anya.
Oge ga-egosi na m na-ezighị ezi ma ọ bụ na ọ bụghị ………. Otú ọ dị echere m na ndị ọrụ otu-apụ ma ọ bụ ndị ọrụ bụ 'ihe egwuregwu ụmụaka' Social Media sonyere, dabara nke ọma na My Space, Facebook, wdg.
Ngwakọta Njikọ Njikọ Na Twitterers na-ewetara anyị atụmanya karịrị nke zuru oke………………….. ejiri aka rụọ ya.
BTW Douglas (nke pụtara n'ụzọ kacha mma) Enweghị m ike ịhụ aha gị ebe ọ bụla n'ihi ya, amaghị m onye dere ụdị ozi ahụ ziri ezi na ọkachamara.
Mee 14, 2009 na 11: 20 PM
Ndị enyi m niile ga-achị ọchị na ị na-ahụghị aha m ebe ọ bụla… ike gwụ ha maka ite aha m ebe ọ bụla. 🙂
Mee 13, 2009 na 7: 23 AM
N'ileghachi anya na gburugburu saịtị gị Doug …………………. na anya nke abụọ na ibe ọdịda …………. O doro anya na abụ m kpuru ìsì!
Echere m na ị ga-aghọta nke a: -
Twitter ọ bụ mmalite nke Weebụ 3.0? http://budurl.com/whpm